HIM | Health in Myanmar » 2011 » March
HIV tests (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) စစ်ဆေးနည်းများ (၃)
Two versions of beginner's guides to the Global Fund
Many of us do not fully understand the Global Fund. It is our responsibility to find out about it. No other funder is as transparent as the GF. There is big website. And the more we know, the better the Funds will be spent.
”ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ်လေးတွေဟာ HIV နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေး အသိပညာနဲ့ ဗဟု သုတတွေ နည်းပါးနေသေးတဲ့ အတွက် အခုလို ရောဂါကူးစက် ခံရမှုနှုန်း မြင့်မားလာ ရတာပဲ။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေကို ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိရှိခြင်းရှိ၊ မရှိ စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာ အမျိုးသား ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အမျိုးသမီး ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ကပဲ HIVနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတအနည်းငယ် ရှိတာကို တွေ့ ရတယ်”
Trainings upon trainings and migrant workers
Trainings for activists? Or training for fisherfolk? Or is it migrant workers?
AIDS နှင့် မျိုးဗီဇ ကုထုံသစ်
''Jay Johnson ဆိုတဲ့ လူနာက ပြောထားတာရှိတယ်။ သူက အသက် ၅ဝ ရှိပြီ။ HIV ပိုးတွေ့ထားတယ်။ သူ့ရဲ့ရလဒ်တွေက သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်တဲ့။ အဓိကရည်မှန်းချက်က ARV တွေဆက်မသောက်ဘဲ နေနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ခုဆို အဲဒီရည်မှန်းချက် ပြည့်ဝဖို့ နီးပါပြီတဲ့''
American news about Myanmar
American news about Myanmar is often superficial and biased. Here it is said that the HIV / AIDS crisis is 'burgeoning'. That means increasing. Is incidence increasing? No, it is probably declining. Is prevalence increasing? No, in most populations and places it is declining. Is the response in crisis? Nope. What crisis are they talking about?
ကျောက်ကပ် အလှူရှင်ထံမှ HIV ကူးစက်ခံရ
”အလှူရှင်က ဆေးစစ်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အပျော်အပါးလိုက်စားမှု ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက် လှူမယ့်သူတွေလည်း ဒီအန္တရာယ်ကို သတိပြုဖို့လိုတယ်။ ဆေးရုံတွေအနေနဲ့လည်း ခွဲစိတ်ချိန်နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး ကာလမှာ ဆေးစစ်မှုကို ထပ်မံ ပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်”ဟု အဆိုပါဆေးရုံမှ ပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
Case finding for tuberculosis and prevention of tuberculosis among PLWHIV
New WHO guidelines for “Intensified case-finding for and prevention of tuberculosis in adults and adolescents living with HIV” were published during the distracting the noise of World AIDS Day last year. Now isagood time to read them.
အေ့ဒ်စ်ရောဂါသည်ပါဟု ခေါင်းစဉ်တပ်၍ တောင်းရမ်းသူများရှိလာ
HIV/ AIDSဟောပြောပွဲတွေ ကို မူးယစ်ဆေးသုံးတဲ့သူ၊ ပြည့်တန်ဆာ၊ ပြည့်တန်ဆာဆီလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ၊ အမျိုးသားချင်းစုံဖက်တဲ့ သူတွေကို အများဆုံး ပြောပြဆွေးနွေးတယ်။ လိုနေတာက လူငယ် တွေကို အသိပေးဖို့ပဲ။ မိဘတွေ၊ ဆရာသမားတွေက ဒါကို ခွင့်မပြုကြဘူး။ ငယ်သေးတယ်၊ ပျက်စီးပါ့မယ်ဆိုပြီးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဒီ ကောင်း အောင် ပြောပြသွန်သင်မယ့် သူတွေကသာ စောင့်တာ။ ဗီဒီယိုတွေ၊ အင်တာနက်တွေ၊ လူကုန်ကူးမှုတွေကတော့ ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီး စောင့်တာမျိုးမရှိဘူး။ ဒီရောဂါ ဖြစ်တဲ့သူအများစုကတော့ လိင်ဆက်ဆံလို့ ကူးကြတာပဲ။ ဒါမို့ လူငယ်တွေကိုလည်း ဟောပြောဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်” ဟု Marie Stopes NGO မှ ဒေါက်တာ စစ်နိုင်က ထပ်လောင်းပြောသည်။
A view from ten years ago
This article on commercial sex and links to the rulers was published ten years ago. What has changed and what has not?
Case study on PSI Myanmar franchising
A case study on the clinical social franchising of PSI Myanmar has been published. Good reading.